April 2019 – Trend.com.mm
Posted on April 30, 2019 May 2, 2019 by Wint
လူတစ်ယောက်ဟာ ဘဝမှာ မျက်ရည်ပေါင်း ၁၆.၅ဂါလံလောက်ထွက်ကြောင်း သိပံ္ပပညာရှင်တွေ ကပြောထားပါတယ်။ ဒါနဲ့ ငိုကြွေးခြင်းက ဝိတ်ကျစေတာနဲ့ရော ဘယ်လိုဆက်စပ်နေမလဲ? » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Health, LifestyleLeaveaComment on ရည်းစားပူမိလို့ ငိုကြွေးမိရင် ဝိတ်လည်းကျစေသတဲ့…
ကိုယ်ကတော့ ပိုချစ်ရတယ်။သူကတော့ ကိုယ့်ကိုသိပ်ချစ်ပုံမရဘူးဆိုပြီး ပြောလေ့ရှိကြပါတယ်။တကယ်ပဲ အချစ်ရေးတစ်ခု စုံတွဲတစ်တွဲမှာ ပိုချစ်ရတဲ့သူဆိုတာရှိလား? တစ်ချို့သောဆောင်းပါးတွေရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ အချစ်ကိုတိုင်းတာလို့မရပေမဲ့ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, RelationshipsLeaveaComment on အချစ်ရေးတစ်ခုမှာ ပိုချစ်ရတဲ့သူဆိုတာရှိလား?
မျက်နှာက အရေးအကြောင်းတွေကို ဒီလိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေနဲ့ဖျောက်လို့ရပြီ …
Posted on April 30, 2019 by Wint
မျက်နှာကအရေးကြောင်း အပြစ်အနာဆာတွေကို ခုခေတ်မှာ ဆေးခန်းသွားပြီး နည်းပညာအသစ် တွေနဲ့ တိုက်ဖျက်လိုက်ကြတာပါပဲ။ ဒါတွေထက် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာကို ကျန်းမာရေးလည်း » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Beauty, LifestyleLeaveaComment on မျက်နှာက အရေးအကြောင်းတွေကို ဒီလိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေနဲ့ဖျောက်လို့ရပြီ …
နနွင်းမှုန့်ဆိုတာ မီးဖိုချောင်မှာအမြဲရှိနေတဲ့ဟင်းချက်အမယ်တစ်ခုပါ။ဟင်းချက်တိုင်းထည့်သုံးလေ့ရှိကြသလို အလှအပအတွက်၊ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း သုံးလေ့ရှိကြပါသေးတယ်။ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ နနွင်းမှုန့်ကိုသုံးလေ့ရှိလဲ? *၀က်ခြံ ရှားစောင်းလက်ပတ်အရည်စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်းနဲ့ နနွင်းမှုန့် စားပွဲတင်ဇွန်း » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Beauty, Health, LifestyleLeaveaComment on နနွင်းမှုန့်ကို အကျိုးရှိရှိ ဒီလိုအသုံးချကြမယ်
Captain Marvel အဖြစ် နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ဟောလိဝုဒ်မင်းသမီးချော Brie Larson ဟာ ကိုရီးယားကေပေါ့ပ်ပရိသတ်တစ်ယောက်ဖြစ်မှန်း မကြာသေးခင်ကမှ ပရိသတ်တွေက » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Korean, Movies, NewsLeaveaComment on နာမည်ကျော်ကေပေါ့ပ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ ပရိသတ်ဆိုတာ My Day ကတစ်ဆင့်ပြသလိုက်တဲ့ Captain Marvel
ငယ်ငယ်တည်းက စွဲလမ်းခဲ့ရတဲ့ Tom & Jerry ကာတွန်းကားလေးကို Live-Action ရုပ်ရှင် အဖြစ် အသက်သွင်းတော့မယ်ဆိုတော့ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Hollywood, Movies, NewsLeaveaComment on Tom & Jerry Live-Action ရုပ်ရှင်မှာ သရုပ်ဆောင်သွားမယ့် Chloe Grace Moretz
မနက်ဖြန်အရေးတကြီးသွားစရာရှိတယ်၊လှမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ ရုတ်တရက်ကြီးဝက်ခြံတစ်လုံးနှစ်လုံးထွက်လာတာက တကယ့်ပြဿနာအကြီးကြီးတက်တာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ မပူပါနဲ့။တစ်ညတည်းနဲ့ မျက်နှာက ၀က်ခြံတွေချပ်ရပ်သွားစေမယ့်နည်းလမ်းလေးတွေရှိနေပါတယ်။သဘာဝနည်းလမ်းလေးတွေဖြစ်လို့ အန္တရာယ်ဖြစ်မှာလည်းစိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး။ဒီတော့အရေးပေါ်နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေက ဘာတွေလဲ? *သွားတိုက်ဆေး သွားတိုက်ဆေးဆိုပေမဲ့ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Beauty, LifestyleLeaveaComment on အရေးတကြီးသွားစရာရှိနေတဲ့အချိန် ၀က်ခြံပေါက်လာတဲ့အခါ ဒီနည်းလေးတွေကိုသတိရလိုက်ပါ
Posted on April 29, 2019 by Wint
အင်း… ကိုယ့်အကြောင်းကလွဲရင် သူများအကြောင်း အတင်းတုပ်ရတာလောက် ပြောလို့ကောင်းတာ မရှိတော့ပါဘူး။ ကိုယ့်အကြောင်းကလွဲရင် သူများအကြောင်းအကုန်စိတ်ဝင် စားကြတယ်။ အပေါ်ယံလေးကြည့်ပြီး » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, WellbeingLeaveaComment on သူများဘဝကို လိုက်ဝေဖန်တတ်တဲ့သူတွေဟာ …
အခုလိုပူပြင်းတဲ့ရာသီမှာ အားလုံးက ခန္ဓာကိုယ်ချွေးထွက်ဆုံးရှုံးတာကိုပြန်ဖြည့်ဖို့ အသီးအနှံတွေများများစားကြပါတယ်။အထူးသဖြင့် ဖရဲသီးစား ကြပါတယ်။ဒီလိုဖရဲသီးစားတဲ့အခါမှာ တစ်ချို့သောသူတွေကပြောကြပါတယ်။ဖရဲသီးစားပြီးရင် ရေမသောက်သင့်ဘူးလို့! ဖရဲသီးမှာ ရေဓာတ် » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Health, LifestyleLeaveaComment on ဖရဲသီးစားပြီး ရေထပ်သောက်သင့်လား?
အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း Yoo In Young နဲ့ဆက်ဆံရေးကို SBS’s “My Ugly Duckling.” အစီစဉ်မှာ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Korean, Movies, NewsLeaveaComment on ရည်းစားဟောင်းကတောင် သဝန်တိုရတဲ့ထိ Yoo In Young နဲ့ ရင်းနှီးမှုအကြောင်းပြောပြလာတဲ့ Kim Ji Suk